Tayada Sare ee Warshadda Shiinaha 304 316 310s Warshadda miisaanka biibiilaha ahama iyo soosaarayaasha | Huayi
Tayada Sare ee Warshadda 304 316 310s miisaanka biibiilaha ahama
Biibiile aan xuduud lahayn oo biibiile ah waa nooc ka mid ah biraha dhaadheer oo leh meel godan oo aan lahayn tolmo ku wareegsan. Waa biibiile bir ah oo u adkaysta dhexdhexaadka daxalka ee daciifka ah sida hawada, uumiga iyo biyaha iyo kiimikada daxalka leh ee kiimikada sida aashitada, alkaliinta iyo milixda. Waxa kale oo loo yaqaannaa biibiilaha birta u adkaysta aashitada. Marka loo eego qaab -dhismeedka kaladuwan ee biraha bir -birta ah ee birta aan birta lahayn, waxaa loo kala qaybin karaa bir -bir -bir -bir -bir -bir -bir ah oo bir -bir ah, martenitic biibiile, biibiile birta austenitic, biibiilaha birta ah ee austenitic ferritic, iwm.
Biibiile aan xuduud lahayn oo biibiile ah ayaa u adkaysta dhexdhexaadka daxalka ah ee daciifka ah sida hawada, uumiga iyo biyaha iyo kiimikada daxalka leh ee kiimikada sida aashitada, alkaliinta iyo milixda. Waxa kale oo loo yaqaannaa biibiilaha birta u adkaysta aashitada.
Caabin daxalka ee biibiile aan xuduud lahayn oo biibiile ah waxay ku xiran tahay walxaha daawaha ee ku jira birta. Chromium waa curiye aasaasiga ah si loo helo iska caabinta daxalka ee birta aan lahayn. Marka maadada chromium ee birtu ay gaarto ilaa 12%, filim oksaydh khafiif ah (filinka is -dhaafinta) ayaa laga sameeyaa dusha birta sababta oo ah isdhexgalka ka dhexeeya chromium iyo oksijiin ee dhexdhexaadka daxalka leh, kaas oo ka hortagi kara daxalka dambe ee birta substrate. Ka sokow chromium, nikkel, molybdenum, titanium, niobium, copper, nitrogen iyo walxaha kale ee isku dhafka ah ayaa badiyaa loo adeegsadaa biibiilaha aan xuduudda lahayn si loo buuxiyo shuruudaha adeegsiga kala duwan ee qaab dhismeedka birta iyo guryaha.
Darajada biibiilaha birta 300series 、 400series s 200series0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2
Dheer kulul oo la duudduubay (la soo saaray oo la ballaariyay): 1-10mcold la duubay (la sawiray): 1-7m
Ballaca Dibedda kulul la duubay: 54-480mm/qabow la sawiray: 6-200mm
dhumucda derbiga 0.5-45mm
Biibiile aan xuduud lahayn oo biibiile ah waa nooc ka mid ah bir wareegsan oo wareegsan, kaas oo si weyn loogu isticmaalo batroolka, kiimikada, caafimaadka, cuntada, warshadaha iftiinka, aaladaha farsamada iyo dhuumaha kale ee warshadaha iyo qaybaha qaabdhismeedka farsamada. Intaa waxaa dheer, marka xoogga foorarsiga iyo torsionku ay isku mid yihiin, culeysku wuu fudud yahay, sidaa darteed waxaa sidoo kale si ballaaran loogu adeegsadaa soo saaridda qaybaha farsamada iyo dhismayaasha injineernimada. Waxa kale oo loo isticmaalaa in lagu soo saaro dhammaan noocyada hubka caadiga ah, foostooyinka, madaafiicda, iwm.
Hore: ASTM AISI SUS 201 202 304 316 430 qiimaha saxan birta ah ee birta ah halkii kg
Xiga: Daawaha hoose ee xoogga sare /Tuubooyinka birta aan xuduud lahayn ee ujeeddooyinka dhismaha
API-5L dhexroor Large muquuninta welded biibiile Oil ah ...
Gasho saxan birta u adkaysta / saamaynta p u adkaysta ...